शालिकरामलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेहरु काे काे थिए त ? एक्स्क्लुसिभ भिडियोसहित::Nepal Online News Portal
शालिकरामलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेहरु काे काे थिए त ? एक्स्क्लुसिभ भिडियोसहित
पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरण यस्ताे रहस्य
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या जतिजति दिन बित्दै गयो, त्यतिनै नयाँ नयाँ विवरणहरु आइरहेका छन् ।
बुधबार सार्वजनिक भएको भिडियो क्लिप्सलाई हेर्ने हो भने पुडासैनीको मृत्य आत्महत्याबाटै भएको बुझ्न सकिने आधारहरु देखिन्छन् । यू–ट्यूब च्यानल ‘नेपाल आज’मा बुधबार राखिएको भिडियोमा पुडासैनीले आफूले पत्रकार रबि लामिछानेकै कारण न्यूज ट्वान्टी फोर छाडेर माउन्टेन टेलिभिजनमा गएको र त्यहाँ पनि बस्नै नसक्ने गरी मानसिक तनाव दिने गरिएको र लामिछाने र युवराजले आफूलाई फसाउने योजना बनाएको खुलासा गरिएको छ ।
भिडियोमा पुडासैनीले आफ्नो आत्महत्या गर्नुपछाडिको मुख्य हात रबि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई दोषी देखाइएको छ । ‘मलाई मर्न बाध्य पार्ने तिमी हौ रबि तिमी’ अाैंला ठड्याउँदै उनले भनेका छन्, ‘अनि युवराज कँडेल र अोखलढु‌गाकी अस्मिता भन्ने रुकु कार्की हाै, यसमा दीपक दाइकाे दाेष छैन’ दाबी गरिएको छ, ‘यदि नेपालमा फाँसी दिने कानून थियो भने तिमीहरु तीन जनालाई त्यो कानून लगाए मात्र मेरो आत्माले त्यतिबेला शान्ति पाउँछ’ भिडियोमा प्रष्टसँग सुन्न सकिन्छ । ‘मेरो हत्यारा तिमी हौं नेपालको कानून अनुसार कारवाही होस्’ उनले भनेका छन् ।
भिडियो रातको समयमा खिचिएको र छातिदेखि माथिको भाग मात्र देखिएको छ । कम्मरमाथि सेतो स्यान्डो मात्र लगाएको र विक्षिप्त मुद्रामा रुँदै आत्महत्याको बेलिविस्तार लगाउँदै गरिएको भिडियो देख्न सकिन्छ । पूरैजसो अवधि रोएर बाेलेको देख्न सकिन्छ ।
भिडियोमा उनले श्रीमती सम्झनालाई अर्को बिहे गर्न र राम्रो जीवन बिताउन भनेका छन् । सम्झना तिमी भर्खर २४ वर्षकी भयौ । अर्को बिहे गर्न सक्छौ, मैले मजाले भनेको छु हाम्रो सम्पत्ति तुरुन्त तिम्रो नाममा गर्नू, कसैको हक लाग्दैन’ उनले भनेका छन् । बिचबिचमा उनले धेरैपटक लामो शास तानेका पनि छन् ।
रामकोटमा एउटा घर बनाउन र बिहे गर्न सुझाएका छन् । ‘सम्पत्तिको राम्रोसँग हेरचाह गर्नू, रामकोटमा एउटा राम्रो घर बनाऊ, तिम्रो जिन्दगी राम्रो हुन्छ, है सम्झना, मलाई माफ गर, व्यवहारले यस्तै भो’ भिडियोको अन्तिममा दुई हात जोड्दै माफी माग्दै भनेका छन् ।
बाबुआमासँग उनले हात जाेडेरै माफी मागेका छन् । ‘आमा बुबा माफ गरिदिनुहोला, के गर्नू व्यवहारले त्यस्तै भो’ भनिएको छ । जागिरे जीवनमा निकै कष्ट र अभाव भोगेको पीडा पनि उनले भिडियो सन्देशमा व्यक्त गरेका छन् । ‘रबिमाथि तस्कर, व्यापारी र ठूला घरानाहरुसँग पैसा असुल्ने गरेको र त्यसले एक दिन पोलेरै छाड्ने’ भनेका छन् । रबि लामिछाने न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘जनतासँग सिधा कुरा’ कार्यक्रम प्रस्तोता हुन् । पुडासैनी त्यसैमा फिल्ड रिपोर्टिङ गर्थे । काम गर्ने क्रममा आफूमाथि ज्यादति गरेको र पछिल्लो समयमा रबिसहित ३ जनाको समूहले ‘बलात्कार’ को आरोपमा फसाउने प्रपञ्च रचेको थाहा पाएपछि बाँच्नुभन्दा मर्नतिरको बाटो रोजेको सन्देश भिडियोमा उनले पोखेका छन् । भिडियो १२ मिनेट ३५ सेकेन्डको छ ।
पत्रकार पुडासैनीको मृत्यु ‘आत्महत्या’बाट भएको सुरक्षा निकायको समेत दाबी रहिरहेको बेला ‘आत्महत्या’ गर्नु अगाडिको रेर्कड भनी ‘भिडियो रेकर्ड’ सार्वजनिक भएको छ । न्यूज २४ टेलिभिजनमा छाडेर केही समयअघि मात्र माउन्टेन टेलिभिजनमा काम थालेका नुवाकोटको बेलकोटगढी नपा–३ घर भएका पत्रकार पुडासैनीको शव साउन २० गते सोमबार बिहान चितवनको नारायणगढस्थित कंगारू होटलको एउटा कोठामा डोरी घाँटीमा पासो हालेर झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो ।
पुडासैनीले आत्महत्या गरेर मृत्यवरण गरेको प्रहरीले दाबी गर्दै आइरहेको छ । जे होस्, सत्य एउटै हुन्छ । पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर आगामी दिनमा यस्ता घटना हुनबाट रोक्न सक्नु राज्यको दायित्व हो ।
तस्बीर तथा भिडियाे नेपाल आज यू–ट्युब